Ukuphupha usesikhathini noma uya esikhathini – iAfrika
Leli yiphupho elibhekene nabantu besifazane kuphela ngoba umuntu wesilisa akayi esikhathini. Lihle kakhulu kumuntu osuke ebhekene nenkinga noma izinkinga, libikezela ukudlula kulobo bunzima noma izingqinamba asuke ebhekene nazo. Imvamisa umuntu usuke engasiboni isixazululo futhi eselahle nethemba, kepha esikhathini esingeside isixazululo sisuke sizozifikela futhi aphume kuleyo nkinga kalula. Usizo lokuphuma kuleyo nkinga lusuke luzoqhamuka kumuntu obelungalindelwe kuyena nangesikhathi ebesingalindelwe.
11 thoughts on “Ukuphupha usesikhathini noma uya esikhathini”
Kusho ukuthi ukuphupha uchithekelwa I sisu?
27/06/2021 at 07:48
Ngiphuphe ngifonelwa I boyfriend yami ithi ifuna kungibona, uma ngi check ngathi ngise skhathini ngimtshele ukuthi mangiza kuyena ngeke senze lutho ngoba ngisesikhathini sizihlalela sizixoxele. Ngabe kusho ukuthini lokhu?
Ngiphuphe ngiya ocansini neBoyfriend yami ngiseskhathini, emvakwalokho ngezwa ngiphathwa islumo ngezwa wngathi ngingaphusha mangiphusha kwaphuma into engathi indwangu emhlophe enegazi wayidonsa yena
Ngiphuphe umngani wami opha nga phansi kodwa ngalisula kusho ukuthini
Nalu ulwazi esinalo ngalokhu https://iafrika.org/amaphupho-ngegazi-nokopha/
Kusho ukuthini ukuphupha usaziwayo kodwa umnikeza izimbali?
14/02/2021 at 02:24
Uma uphupha uya etoilet leli lesilungu uyochama mawufika umane uchithekelwa isisu kodwa ungakhulelwe in real life. Uze usho igama lesoka lakho kuthi uzolifonela ulitshele ukuthi uyopha uchithekelwa isusu.